Ebili mmiri na-egbu egbu ga-abụwanye Ugboro | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbanwe ihu igwe na-apụtawanye ma na-ebibi ihe, mmetụta ya na-abawanye ma na-ebibi ihe, agbanyeghị, mbọ a na-agba iji belata ya anaghị eme ya, ma ọ bụ opekata mpe ezughị ka ha kwesiri.
Dị ka anyị si mara n'oge ndị ọzọ, mgbanwe ihu igwe na-abawanye ụba na ike nke ebili mmiri na ọkọchị, Agbanyeghị, na ụlọ ọrụ mgbasa ozi, anyị anaghị anụ okwu ahụ "mgbanwe ihu igwe" ma ọ bụ "Okpomoku ụwa", kama ọ bụ naanị na-ekwu maka oke ọkụ ma ọ bụ nke na-adịgide adịgide. Gịnị ga-eme ma ọ bụrụ na nke a gaa n'ihu?
1 Ebili mmiri na-abawanye
2 Ọnwụ na okpomọkụ dị elu
Ebili mmiri na-abawanye
Okpomoku nke uwa na mgbanwe ihu igwe na-aputa ihe karia n’ihi mmuba nke anwuru ahihia nke mmadu na-ewepu kemgbe mgbanwe nke ulo oru. A na-eme atụmatụ na 74% nke ndị bi n'ụwa ga-ekpughere ebili mmiri na-egbu egbu site na afọ 2100. A na-eme atụmatụ nke a na oke nke ikuku gas na-aga n'ihu na-abawanye n'otu ọnụọgụ dịka ọ na-eme ugbu a. E bipụtara nke a n'akwụkwọ akụkọ Britain bụ Nature.
Nnyocha ahụ, nke Mahadum Hawaii (USA) mepụtara, na-ebu amụma na, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ihe ndị a na-emepụta na-ebelata oke, gburugburu 48% nke ndị mmadụ ga-emetụta site na mmụba na ọnọdụ mberede na ọnọdụ okpomọkụ. N'ụzọ dị otú a, anyị na-agwụ ike nhọrọ anyị maka ọdịnihu. N'oge a, ebili mmiri na-emerụ ahụ nke ukwuu nke ndị bi na ya (ọkachasị ndị agadi). Ọ bụ ya mere, ọ bụrụ na anyị gara n’ihu otu a, ohere anyị ga - eguzogide oke okpomọkụ ga - adị ntakịrị ma pere mpe
Ebili mmiri na-akpata ọnwụ ọtụtụ puku mmadụ gburugburu ụwa kwa afọ. Otu nnukwu nsogbu metụtara ebili mmiri bụ unwu. Ikpo ọkụ anyị nwere na awa ndị ọzọ nke anwụ, ka mmiri na-ekpokwu na obere mmiri anyị nwere. Ya mere, mmetụta nke ebili mmiri na-ebuwanye ibu mgbe enwere mmiri ozuzo.
Ọ bụrụ na anwuru ikuku gas na-aga n'ihu na ọnụego a, ọnọdụ okpomọkụ zuru ụwa ọnụ ga-aga n'ihu na-arịwanye elu ma ọ gaghị enwe nkwekọrịta Paris nke nwere ike ịkwụsị ya.
Ahụ mmadụ nwere ike ịrụ ọrụ naanị n'ime obere ogo ahụ nke ihe dịka 37 Celsius. Ebili mmiri na-ebute ihe dị egwu nye ndụ mmadụ n'ihi na okpomọkụ dị elu, nke nnukwu iru mmiri na-ebuwanye ibu, nwere ike ibuli ọnọdụ ahụ ma mepụta ọnọdụ nke ahụ na-etinye ndụ n'ihe ize ndụ”, Na-agbakwunye Mora, otu n’ime ndị ọkachamara na-ahụ maka ọmụmụ ihe ahụ.
Dika okpomoku kachasi di ogo 37, metabolism anyi enweghi ike igbasa okpomoku nke emeputara mgbe onodu gburugburu di elu kariri ogo 37. N'ihi nke a, oke okpomọkụ dị otú ahụ bụ ihe egwu ahụike, ebe ọ bụ na ikpo ọkụ nwere ike ime n'ime ahụ nke na-emebi.
Ọnwụ na okpomọkụ dị elu
Ihe omumu a emeela nyocha banyere onwu nile nke kpatara usoro nke ikpo oku site na 1980. Ihe kariri ikpe 1.900 achoputala na mpaghara di iche iche nke uwa ebe otutu oku mere ka onwu. E nweela ebili mmiri ọkụ 783 na-egbu egbu ha achọpụtawokwa ọnụ ụzọ okpomọkụ na iru mmiri nke, site na ebe ahụ, mmetụta dị na ahụ ike na-egbu egbu. Mpaghara mbara ala ebe ọnọdụ ihu igwe ga-agafe n'ọnụ ụzọ ahụ maka ụbọchị 20 ma ọ bụ karịa kwa afọ abawanyewo na afọ ndị na-adịbeghị anya na ndị ọkà mmụta sayensị kwenyere na ọ ga-aga n'ihu na-eto eto ọbụlagodi na anwuru anwuru gas.
Ihe omuma atu ndi okacha mara nyere gunyere otutu ekpom oku nke dakwasiri Europe na 2003 ma gbue ihe dika 70.000 onwu, nke metutara Moscow (Russia) na 2010 wee gbuo mmadu 10.000, ma obu nke Chicago na 1995 , nke ruru narị mmadụ asaa nwụrụ. Ugbu a, Ihe dịka 30% nke ndị bi n'ụwa na-ekpughere ọnọdụ ndị a na-egbu egbu kwa afọ.
Nke a bụ ihe na - akpata mgbanwe ihu igwe ma mbọ iji belata ya pere mpe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri ọkụ » Mmiri ebili mmiri na-egbu egbu ga-adịkarị
Oge udu mmiri ga-ekpo oke oku na mpaghara Mediterenian